Imaginary Time | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
The Official Blog Of Dr Chit Nge (© 2009 – 2017. All Rights Reserved)
Tag Archives: Imaginary Time
အရိယာ ရဟန္တာ နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ဆွေးနွေးခန်းများ(23)
Posted on October 6, 2012 by chitnge
အရိယာ ရဟန္တာ နိဗ္ဗာန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ် ဆွေးနွေးခန်းများ(23) ကိုနန်းအောင် နှင့် ဦးချစ်ငယ် တို့၏ ဆွေးနွေးခန်း ( ၂၂ ) လမ်းရှင်းရခြင်း ငယ် ကိုနန်းအောင် —- တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင် လမ်းရှင်းရတယ်ဆိုတာ အသေအချာ ရှင်းပြစမ်းဗျာ။ ကျွန်တော်သိချင်လို့။ နန်း လမ်းရှင်းရတယ်ဆိုတာ ကုသိုလ်ပြုရတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ တရား အားမထုတ်မီပေါ့ဗျာ။ သာသနာ့ အကျိုးပြု လုပ်ငန်းလေးဘာလေး လုပ်ပေးရတဲ့ သဘောပါ။ ငယ် အဓိက ဆိုလိုချက်က ——- နန်း … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Imaginary Time, Myanmar Posts, လောကုတ္တရာ	|2Comments
Posted on March 5, 2011 by chitnge
သိပ္ပံပညာထဲကဘ၀တစ်ခု (၉) ဟော့ကင်းသည် ထိုအခန်းမှာပင် Black Holes ခေါ် တွင်းမဲကြီးများ အကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ရာ What it meant was that matter could curvearegion in on itself so much that it would effectively cut itself off from the rest of the universe. … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged BLACK HOLE, Black Holes, Imaginary Time, Myanmar Posts, Singularity, ကာလနှင့်ဌာန, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
BLACK HOLE Buddhism Buddhism and Science English Posts Myanmar Posts Nibbana Science Vipassana ကမ္ဘာ ကွန်မြူနစ် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် စိတ္တာနုပဿနာ ဆရာကောင်း ဆရာမြတ်ကြီး ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ တဏှာ ဓမ္မာနုပဿနာ နိဗ္ဗာန် ပဋိပတ္တိ ပါရမီ ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဟန္တာ ရဟန္တာ သင်္ချိုင်း သာသနာ သိပ္ပံ ဟဒယ အတ္တ အနတ္တ အနိစ္စ အရိယာ အသင်္ခတ အိုင်းစတိုင်း အ၀ိဇ္ဇာ ရွှေစာမျက်နှာများ လောကီ လောကုတ္တရာ ဟော့ကင်း မြတ်စွာဘုရား မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ၀ိပဿနာ
Dr Chit Nge on FB
Buddhism & Science (140)
Book Corner (7)
Philosophy of Science (15)
မှန်တာလေးလောက်တော့ ပြောပေးဖို့ကောင်းပါတယ် —
ဘာသာ​ရေး သာသနာ​ရေးဆိုတာ —
Something about Nirvana
Hnin Wink Khaing on ဝိပဿနာနှင့်အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ (၃၇)
San lwin on သစ္စာရှိသောဗုဒ္ဓဘာသာယောဂီများအတွက် —
Hnin Wink Khaing on Welcome to Dr Chit Nge’s Website
Hnin Wink Khaing on နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးသောအခါ —
san lwin on ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်နှင့်အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ (၃၉)
U Oak TTTK on ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နှင့်အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ 21
U OAK TTTK on NLD အပေါ်မှာသုံးနှုန်းသော ဦးဝင်းတင်၏ စကားများကို ကန့်ကွက်ပါတယ်
U OAK TTTK on ပရဟိတလုပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုတန်ဖိုးမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့
U OAK TTTK on သာသနာမှာရှက်စရာ
Total Visitors : 7346
Today Visitors : 60